Mashandisiro ekushandisa maPC maviri nechiratidziro chimwe (HDMI switch), Emulator.online ▷ 🥇
Kana tikashanda nemakomputa zvakanyanya, kugadzirisa, kumhanyisa chitoro chemakomputa, kana kunyora zvinyorwa zvine musoro pane yedu pachezvako blog, zvinogona kuitika kuti tine maviri desktops uye imwechete yekutarisa yekushandisa pane ese ari maviri. Muchiitiko ichi, hazvikurudzirwe kushandisa imwechete HDMI tambo uye kuifambisa kubva kune imwe komputa ichienda kune imwe sezvainodiwa sezvo chiteshi cheHDMI chisingawanikwe nyore nguva dzose, pamwe nekuchigumburisa kushandisa makomputa maviri panguva imwe chete. Sevanyanzvi veIT, isu tinogona kubheja pane yakanaka HDMI chiratidzo duplicator O HDMI chinja, inokwanisa kutonga maviri akaparadzaniswa odhiyo / vhidhiyo hova uye kuatumira kune yega yekutarisa yatinayo, nemaoko kusarudza komputa yekupa pekutanga kuchiratidziro zvichibva pane zvatinofanira kuita panguva iyoyo chaiyo.
Muchirongwa ichi tinokuratidza maitiro ekugadzirira maviri emakomputa ekugovana imwechete yekutarisa, uchinyatso sarudza tambo 3 HDMI yekushandisa uye inoshandura kuti ishandise pakati pemamodeli anowanikwa paAmazon. Muchitsauko chakatsaurirwa tichaonawo mashandisiro ekushandura USB, kuti tikwanise kutsausa zvishandiso zvedu (kiibhodhi uye mbeva) kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe nenzira yakapusa.
VERENGA ZVIMWE: Manage maviri monitors pane yakawedzerwa desktop PC
Mashandisiro ekushandisa maPC maviri aine imwe yekutarisa
Kugadzira iyi nharaunda yakagovaniswa, zviripachena kuti isu tichafanirwa kuve necomputer imwe chete, maPC maviri akagadzika kana maviri makomputa echinhu chero chipi zvacho (kunyangwe PC neparaputopu kana PC neMac Mini), tambo nhatu dzeHDMI dzehurefu hwakakodzera uye switch. HDMI inokwanisa kugadzirisa maviri akazvimirira HDMI hova uye kugadzira imwechete kuburitsa, iyo inosvika kune yekutarisa's HDMI port. Kana isu tisati tatenga komputa nyowani parizvino, tinokurudzira kuti uverenge ese matipi uye manomano mugwara redu Zvinhu zvekuziva usati watenga komputa nyowani.
Sarudzai akakodzera HDMI tambo
Pakugadziridza uku tinoda tambo nhatu dzeHDMI: imwe yekomputa yatinozoona se "PC 1", imwe yekomputa iyo yatichadaidza kuti "PC 2" uye pakupedzisira tambo yekupedzisira yeHDMI, inozobatanidza iyo HDMI kuburitsa kwesarudzo yakasarudzwa kune yedu yekutarisa. .
Kana isu tichida kuisa switch pa desktop, tambo mbiri dzePC 1 nePC 2 dzinofanira kunge dzakareba zvakakwana (angangoita 1,8 metres), Kufukidza zvakare chinhambwe pakati pemaitiro maviri echinyakare maPC. Pazasi pane runyorwa rwe HDMI tambo dzakakodzera ichi chinangwa.
Rankie Yekumhanyisa HDMI Cable, Nylon Yakarukwa, 1,8m (€ 6)
4K HDMI tambo 2 metres SUCCESO (€ 7)
Kubatanidza switch kune mutariri tinogona kushandisa tambo diki (1 mita kana zvishoma), kutora nzvimbo inokwanisika padhesiki, uchiisa switch zvakare pasi pechirinda (kana pachigadziko chayo). Pazasi isu tinogona kuwana akateedzana akapfupikiswa HDMI tambo.
Zviripachena isu tine rusununguko rwakazara rwekugadzirisa: tinogona kusarudza tambo refu refu, tambo mbiri pfupi uye imwe refu kana kunyange nhatu tambo pfupi, zvichienderana nenzvimbo uye saizi yemakomputa kuti abatanidzwe. Chinhu chakakosha chete ndechekuti tora matatu akanaka mhando tambo HDMI usati waenderera mberi neumwe mutungamiriri. Kana isu tisingazive mazwi anofambidzana neiyo HDMI tambo, tinokurudzira kuti iwe uverenge kwedu kwakadzika kuongorora Maitiro ekusarudza yakakodzera HDMI tambo.
Sarudza kurudyi HDMI switch
Taona tambo dzeHDMI dzekushandisa, tinouya kuchishandiso chinokutendera kuti uchinje sosi yevhidhiyo pakati pemakomputa maviri nekusunda kwebhatani: chinja HDMI.
Chishandiso ichi chinokutendera batanidza maviri tambo HDMI senge yekuisa uye nekupa imwechete HDMI chiratidzo chinobuda (kuburitsa), iyo ichaendeswa kune yekutarisa. Kuchinja kubva paPC kuenda kune imwe, zvese zvatinofanirwa kuita kuidhinda Chinja bhatani iripo kumusoro (kazhinji inofambiswa nemairi maviri akajeka maLED kuti ikurumidze kuziva iyo inoshanda sosi), kuchinja pakati pemaviri maPC akabatana uye kuratidza chete vhidhiyo kubva kune yaunoda komputa pane yekutarisa. Pazasi isu takaunganidza akanakisa HDMI switch dzaunogona kutenga kubva kuAmazon pamutengo wemakwikwi chaizvo.
Techole Chinja HDMI Bidirezionale (€ 9)
GANA Aluminium Bidirectional HDMI Chinja (€ 11)
Techole HDMI chinja (€ 12)
Kana isu tichitenga chimwe cheizi zvishandiso, ngatiitei chokwadi kuti vanoita kunge bidirectional HDMI switch kana kuti vanotsigira "2 yekuisa-1 kuburitsa"Zvikasadaro, tinoisa mukana wekutenga chinhu chakafanana asi chakasiyana zvakasiyana seHDMI mahwanda, iyo inobvumidza mamonitor maviri kuti abatanidzwe kune imwechete PC (mamiriro akasiyana kwazvo kubva patinogadzika gwara rese).
Iye zvino zvatave nezvose zvatinoda kuti tikwanise kubatanidza makomputa edu maviri kune imwechete yekutarisa tinogona kuenderera neyekupedzisira kumisikidza: batanidza iyo HDMI tambo kune iyo inotsemura, kuongorora uye makomputa, batidza tarisa uye batidza imwe yeayo maviri makomputa (kana ese ari maviri): iyo switch yeHDMI inozoshanduka yega pachayo ichishandisa iyo yazvino kubva pamatafura eHDMI uye nekudzvanya bhatani ratinogona kusarudza kana tarisa vhidhiyo kubva PC 1 kana PC 2; kuitira kuti zvinhu zvese zvinyatsobatanidzwa isu tinogona zvakare kutevedzera nhanho dzemutungamiri wedu Imwe mbeva nekhibhodi kudzora maviri kana anopfuura makomputa, kuitira kuti iwe ugone kugovana mbeva nekhibhodi pakati pemakomputa maviri (kutaura zvazviri, tichava nemaswitch maviri, imwe HDMI uye imwe USB). Iyo HDMI switch inokwanisa zvakare kushandiswa batanidza zvinyaradzo zviviri kuterevhizheni Iyo ine imwechete HDMI doko, saka iwe unogona kutora mukana kune ese ari maviri pasina kuchinja TV (yakanyanya kudhura mutengo).
Kana isu tichida kushandisa maviri monitors padivi necomputer imwechete, tichishandisa HDMI zviteshi zveakatsaurwa vhidhiyo kadhi, tinokurudzira kuti iwe uverenge magwara edu Maitiro ekubatanidza maviri monitors kuPc mi Dual screen yekugadzirisa mukati Windows 10 kushanda nevatariri vaviri.
Kana iyo yekutarisa yatiinayo isina HDMI chiteshi, inguva yekuchichinjira kune imwe ichangoburwa, kusarudza pakati pemamodeli anoonekwa mumaraini edu Iwo akanakisa PC monitors kutenga pakati pezana ne100 Maeuro mi Tenga 21: 9 Wide Monitor (Ultra Wide Screen).
Maitiro Ekugadzira Hofisi Dhinda Server
Maitiro ekugonesa kuverengera muBIOS, nekukurumidza michina chaiyo
Nzira yekugadzirisa BSOD kukanganisa (0xc00000e) muWindows 10
Tiles, akaturikidzana, kana akaturikidzana windows mukati Windows 10
Kwete USB Flash Drives kana External Drives Yakawanikwa - All Solutions
Tarisa mabasa eWindows ane nhoroondo yechiitiko
Maitiro ekuronga mabasa muWindows
Maitiro ekuona Windows Printer Nhoroondo
Dzivirira kukwidziridzwa kweWindows muWindows kuti utonhedze kutenderera kwevhidhiyo
Ronga maviri monitors pane yako yakawedzera desktop PC
Maitiro ekunyaradza PC
Microsoft .NET Chimiro, gadzira gadziriso uye uninstall zvikanganiso